STRAWBERRY "ELIZABETH 2": SHARAXAADDA IYO FAAHFAAHINTA NOOCYO SOO KORDHAYA - STRAWBERRIES
Sidee "Elizabeth 2", xeerarka beerto iyo daryeelka ee berry boqornimada
Strawberry Berry oo ay jecel yihiin dad badan. Waxaa jira noocyo badan oo dhirta, mid kastoo uu leeyahay sifooyinkiisa: dhadhamin, muuqaal, dhalid. Difaacyada strawberry Elizabeth 2 ayaa door bidey by bannaanka u badan, iyo tani waxay u sabab u ah tayadiisa.
Ma taqaanaa? Bannaanka iyo bannaanka u qarsoon noocyo badan oo kala ah Elizabeth 2 sababtoo ah xaqiiqda ah in berry ay si fiican u qaadeen iyo kaydiyaa. Intaa waxaa dheer, ma aha wax u muuqda inta lagu jiro daweynta kuleylka waxayna ku fiican yihiin barafka.
Noocyada sharaxaadda "Elizabeth 2", sababta ay caan u tahay
Strawberry Elizabeth 2 wuxuu leeyahay sifooyinka soo socda (sharaxaadda noocyada kala duwan ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya doorashada dhaqanka loogu talagalay taranta):
miro waaweyn oo leh dusha sare iyo jidhka cas;
dhadhan macaan: berry waa macaan iyo macaan.
Dhaliddii Strawberry Elizabeth 2 waxay u muuqataa mid xoog leh. Waxay leeyihiin boodhyo badan iyo caleemo waaweyn oo leh cagaar cagaaran madow, xitaa marka ay dhacdo marka ay u muuqdaan dhawaan. Waxaa jira dhir badan oo fruiting. Asal ahaan, berry wuxuu leeyahay miisaankiisu yahay 40-50 g, in kastoo ay jiraan walxo waaweyn oo culeyskoodu yahay 100-125 g.
Haddii aadan ka saarin caleemaha ubaxa, Elizabeth 2 waxay sameysmeysaa 3-5 dufan leh 2-3 rosettes inta lagu jiro xilliga xagaaga, taas oo la xiriirta qashin xoog leh oo ku saabsan abuurista beerashada. Peduncles waxay ku yaalliin heerka hoose ee caleemaha iyo laftirka miisaanka miisaanka.
Kala duwanaanshahan, dad badan ayaa soo jiidanaya dib-u-eegis. Harvest from Elizabeth 2 ayaa la soo ururin karaa bilawga xagaaga illaa badhtamaha. Berry waa dhadhan fiican oo udgoon, laakiin beergooyska, wuu boogaadiyay Juun-Luulyo, wuxuu leeyahay dhadhan dhidid ah bisha Sebtembar.
Tani noocyo kala duwan oo berry ah waxay u adkeysanayaan cudurada iyo cayayaanka.
Sida loo koro strawberries laga bilaabo abuurka
Si ay u koraan strawberries laga bilaabo abuur, waa inaad ku bixisaa tamar badan. Laakiin habkani waa mid waxtar leh oo kuu ogolaanaya inaad hesho warshadda kala duwan ee la doonayo. Geedi socodka strawberries sii kordhaya Elizabeth 2 laga bilaabo abuurka waxaa ku lug leh fulinta dhowr ficilo isku xiga:
Awoodda geedo u baahan tahay in laga buuxiyo ciidda 12 cm;
ku qoyso ciidda biyo ka hor inta aadan beeri abuurin;
miraha si siman u faafi dusha sare kuna riix dhulka;
Waa suurtogal in la beero miraha kala duwan ee kala duwan ee strawberries dhamaadka Janaayo, haddii ay suurtogal tahay in ay bixiyaan iftiin dheeraad ah. Haddii kale, abuurka waxaa la beeray karaa dhamaadka bisha February ama horaantii March.
Waa muhiim! Si ay abuurka u biqin si fiican, ka dib markii la beero, waa in lagu daboolo dhalooyinka ama bac quraarad ka kor ku xusan, sidaas oo abuuraya saameeyaha aqalka dhirta lagu koriyo.
Muhiim ma aha in la qoto dheeraado abuurka dhulka, maaddaama ay Gagaashka ku daaqaan. Sidaa darteed, waxaa fiican in la dhigo weel leh geedo daaqada daaqada ee daaqad dhalaalaya.
Ciidda waa inay siisaa helitaanka hawada, oo ah muraayadda maalinlaha ah ama filinka, oo daboolay miraha, waxaad u baahan tahay inaad kor u qaado.
Muddada habraaca waa 8-10 daqiiqo maalintii, sidoo kale, ciidda waa in la qoyaan, taas oo ay ku haboon tahay in la isticmaalo dhalada buufin.
Ma taqaanaa? Abuurka strawberry waa biqil hoose, kaliya 50-60%. Qodobkani waa in la tixgeliyaa marka la beero oo aan lagu tirin tiro badan oo aan cagajugneyn oo geedo ku xoortay.
Si ay u soo baxaan miraha Elizabeth 2 waxay bilaabaan 14-18 maalmood. Sida ugu dhakhsaha badan caleemaha 1-aad u muuqda, wakhtiga hawo-maalmeedka maalinlaha waa in kor loo qaado ilaa nus saac. Sida ugu dhakhsaha badan geedo u koraan, waa in si tartiib tartiib ah loo barto si isweydaarsiga deegaanka.
Marka geedo sii daayo caleen labaad, waxay ku qasbanaan doonaan in ay hoos u galaan koobab gaar ah. Waraabinta dhirta waa in si taxadar leh loo sameeyaa si rosette uusan madow soo noqnoqon oo geedka ma dhimanayo.
Wixii geedo of Elizabeth 2, iftiin waa mid aad u muhiim ah. Haddii ay jirto xaalad aan fiicnayn iftiinka dabiiciga ah, waa lagama maarmaan in la sameeyo iftiin dheeraad ah.
Ka hor inta beerto geedo dhulka (qiyaastii 2 asbuuc), waa in loo qaabeeyaa xaaladaha banaanka. Si loo dhammeeyo, geedo waxaa loo soo maraa waddada waxayna u baxaan muddo yar. Waqti ka dib, dhererka joogitaanka geedo ee wadada si tartiib tartiib ah u kordhaya.
Meeshii maalintii 120aad ka dib geedo soo baxa, geedo of Elizabeth 2 ayaa lagu beeray meel joogto ah. Geedaha laga helay abuurka ayaa soo saara dalag sannadkii ugu horreeyay, laakiin waxay u dhowdahay Sebtembar.
Sida loo doorto geedo wanaagsan
Xilliga xagaaga, geedo strawberry ayaa si firfircoon loo iibiyaa. Sida ugu dhaqsaha badan saldhigyada xididada, xarumaha xanaanadu waxay bilaabaan inay qaybiyaan geedo. Beeridda bisha Luulyo waxaa loo tixgeliyaa inay tahay tan ugu muhiimsan, sida dhamaadka Agoosto ee sanadkan ubaxa waxaa la aasaasay, taas oo ah furaha sanadka soo socda.
Xilliga dayrta, xannaanooyinku waxay kaloo iibiyaan geedo strawberry ah, laakiin horeba way ka raqiisantahay. Caadi ahaan, for noocyada ugu badan, beeritaanka dayrta ma ogolaanayo sameynta biqil ubax ah, inkasta oo Elizabeth 2 uusan arrintani khuseyn.
Guga waxaa loo tixgeliyaa xilli wanaagsan oo lagu beerayo strawberries. Geedka isku dhafan si fiican ayuu u qaadanayaa. Waxa kaliya ee kaliya: ma jiro doorasho ballaaran oo geedo ah ee xanaanada, sidaas darteed waa muhiim in la ogaado sifooyinka ugu muhiimsan ee geedo tayo sare leh.
Calaamadaha wanaagsan ee geedo wanaagsan:
caleemaha waa cagaaran cagaaran, iftiin, jajab ama maqaar;
geedo leh nidaam xidid furan wuxuu leeyahay dhererka xididka ugu yaraan 7 cm;
si toos ah u saameeyaa horumarinta dhirta iyo dhumucda geesaha (dhumucuna waa, inta badan waxaa jiri doona beruud, iyo heerka hoose waa qiimaha 0.7 cm);
geedo koobab iyo cajalado waa inay leeyihiin nidaam xididaysan oo si fiican u horumarsan, taas oo horeyba u suurta gelisay inay si buuxda u maareyso mugga dheriga. Tani waxaa lagu baari karaa adigoo soo jiidaya dhirtii weelka adigoo si tartiib ah u soo jiidaya caleen caleen;
digirta peat leh geedo strawberry waa in la xidho.
Astaamaha geedo aan hoos yimaad:
caleemaha yaryar, caleemaha yaryar ma dhicin ilaa dhammaadka - calaamad muujinaysa joogitaanka cayayaanka strawberry;
Caleemaha cirridku waxay ka hadlaan cudur khatar ah oo ka yimaada necrosis-da xun ee geesaha. Dhirta noocan oo kale ah way dhintaan
dhibco on caleemaha strawberry yihiin dhibco boqoshaada.
Xeerarka dejinta "Elizabeth 2"
Strawberry Elizabeth 2 wuxuu dareemayaa wanaag fiican oo ku yaal berrinka bannaan, koriyo iyo marka lagu koray guriga (ama lagu koriyo). In lagu koriyo, miraha waxay u bislaadaan dhaqso.
Noocyada kala duwan ee Elizabeth 2 waxay leedahay mid ka mid ah muuqaal: kan weyn ee baadiyaha, yar yar ee berry. Xaaladdan oo kale, waxaa lagula talinayaa in lagu beero sariiraha cusub xilliga dayrta, sidaa darteed xilli ciyaareedka soo socda waxaad heli kartaa dhirta diyaar u ah fruiting.
Si kastaba ha ahaatee, marka beeritaanka strawberries dayrta, waa in laga daboolaa qabow. Ujeedadaas awgeed, guryo khaas ah oo qallalan ayaa la dhisay (sida shubanka). Strawberries waxaa lagu faafiyaa by rosettes sii kordhaya on shaarib geedka.
Waxaad dhigi kartaa Elizabeth 2 inta u dhaxaysa gu'ga iyo dayrta. Waqtiga ugu fiicani waa bartam-xagaaga (Agoosto). Bil ka hor beerashada, waa in la diyaariyaa ciidda. Si tan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa Bacriminta dabiiciga ah ama macdanta (tusaale ahaan, "Kemira"), oo lagu qaado qiyaasta 70-80 grams halkii 1 sq.
Queen Elizabeth 2 strawberry hagaajinta waa mid aad u dalbanaya bacriminta ciidda. Sidaa darteed, marxaladda leh bacriminta ayaa muhiim u ah dhalidda geedka.
Masaafada u dhexeysa duurka strawberry waa inay ahaataa 20-25 cm, iyo inta u dhaxaysa safafku waa inay noqdaan 65-70 cm. Hadday soo degto laba line, markaas masaafada u dhaxaysa laba saf ayaa noqon karta 25-30 cm.
Noocyada koritaanka iyo daryeelka ee strawberries noocyo "Elizabeth 2"
Tan iyo strawberry Elizabeth 2 Blooms iyo dhirbaaxo miro muddo dheer, beeritaanka iyo daryeelidda waxay u baahan tahay fiiro gaar ah.
Marka hore geedka waa in si joogto ah loo quudiyo. Bacriminta oo ay ku jiraan potassium iyo nitrogen waxay u fiican yihiin hawshan, iyo marka la diyaarinayo ciidda beeritaanka geedo, waxaa la bacrimiyaa fosfooraska.
Marka labaad waxay ku taliyeen waraabin badan, thanks by taas oo koraan nooca berry waaweyn.
Qiyaasaha caadiga ah sida dabacsanaanta ciidda iyo jarista haramaha ayaa sidoo kale faa'iido u leh noocyada kala duwan. Mulching ciid waxaa soo saaray humus, caws, dhadday. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la isticmaalo Bacriminta organic, kuwaas oo ay adagtahay in ay dhaafaan strawberries.
Inta lagu jiro berry fruiting waa in la quudiyo toddobaadkii hal mar. Quudin joogto ah ayaa la qaadaa potassium iyo nitrogen waxayna ka caawisaa dhirta inay soo saaraan dalag tayo leh.
Si aad u hesho berry weyn, peduncles guga hore u baahan tahay in la saaro. Caleemaha Strawberry waxaa la saaraa ka hor inta jiilaalka, ka dib markii taas waxaa laga daboolay qabow.
Waa muhiim! Strawberry Elizabeth 2 wuxuu u baahan yahay tiknoolajiyadda saxda ah ee beeraha (tusaale ahaan, waxay u baahan tahay sariir sarreysa leh humus), sababtoo ah kaliya markaa waxay siin doontaa goosashada wanaagsan.
Strawberry Elizabeth 2 wuxuu leeyahay sifooyin gaar ah, kuwaas oo lagu tilmaamay sharaxaadda kala duwan, laakiin badanaa waa suurtogal in la fahmo in noocyada la iibsaday kaliya ka dib markii helitaanka goosashada.
Dhirta Strawberry Elizabeth 2 waxay ka fiican tahay iibsashada guryaha xanaanada gaarka ah, si loo hubiyo astaamaha geedaha la iibsaday. Dheeraad ah, adoo koray strawberries on aad sawir, waxaa suurtagal ah in ay ku faafin leh shaarib ah.